Otu esi eme ka nchọgharị Google Chrome rụọ ọrụ ngwa ngwa na android | Gam akporosis
Otu esi eme ka nchọgharị Google Chrome rụọ ọrụ ngwa ngwa na gam akporo
Ihe nchọgharị Google Chrome na ngwaọrụ gam akporo na-efunahụ ọsọ N'ime oge, otu n’ime ihe na - eme ka ọ belata ntakịrị bụ azụta nchekwa. Mana ọ bụghị naanị ihe anyị nwere ike ime iji mee ya ngwa ngwa, site na ịrụ ọrụ ọkọlọtọ nwere ike ịka mma.
Iji mee ka Google Chrome na-agba ọsọ na Android Enwere ọ dịkarịa ala nzọụkwụ abụọ ị ga-ewere ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ rụọ ọrụ dịka ụbọchị mbụ na ọbụlagodi ka mma. Ihe ewu ewu na ihe nchọgharị a nọ na-mma na mwepụta nke nsụgharị, ịbụ otu n'ime ndị kasị ji site na android obodo.
1 Otu esi eme ka Google Chrome na-agba ọsọ ọsọ
2 Hardware osooso
Otu esi eme ka Google Chrome na-agba ọsọ ọsọ
Ihe mbụ na ihe dị mkpa bụ iji kpochapụ oghere ahụ, ozugbo ihichapụ nke a, a ga-ehichapụ faịlụ ndị na-adịru nwa oge na ọ naghị emetụta ekwentị ma ọlị. Ọ dị mma ịme ya ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ọnwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ faịlụ junk, karịsịa ma a bịa n’icheta ụfọdụ peeji, itinye ihe oyiyi na ihe ndị ọzọ.
Ikpochapụ ebe nchekwa dị na Google Chrome ị ga-eme ihe ndị a:
Nweta Ntọala nke ekwentị gam akporo gị
Chọọ maka nhọrọ «Ngwa» wee chọta ngwa Google Chrome, pịa ya
Chọọ "Nchekwa" wee pịa "Ebe nchekwa efu"
Ọ na-ewekarị megabytes ole na ole, jiri nke a mee ka ihe nchọgharị ahụ rụọ ọrụ nke ọma mgbe ị na-ehicha, n'agbanyeghị na ọ dị elu, ọ dị mma mgbe ọ na-ebu itinye. A na-eji ebe nzuzo ahụ, dị ka ngwa ọ bụla, iji melite sistemụ nnabata, ma ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ ka mma site na ngwa.
Nhọrọ a ga-adị n'ime ọkọlọtọ, ọ bụ otu n'ime ọrụ maka oge ahụ bụ nnwale ma rụọ ọrụ ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ihe nchọgharị ahụ rụọ ọrụ ngwa ngwa. Arụ ọrụ ahụ dị ịrịba ama mgbe ị gbanyechara ya, yabụ ọ bụrụ na ịmebeghị ya na mbụ, ọ ga-akacha mma ịnwale ya na ngwaọrụ gị.
Iji rụọ ọrụ ngwanrọ osooso i nwere ime ihe ndị a:
Ẹkedori gị Google Chrome nchọgharị na android
Na nyocha ọchụchọ tinye "Chrome: // flags"
Ozugbo niile nhọrọ na-emeghe, ọ kasị mma anya na n'elu maka "ngwaike-accelerated video itapia", rụọ ọrụ nhọrọ na "nyeere"
Malitegharịa ekwentị ahụ maka ngwaọrụ iji gbanwee ka ị nwee ike ịhụ arụmọrụ ngwaike ugbu a
Igodo ga-akawanye mma ma e jiri ya tụnyere nke mbụ, ma ọ bụ site na ihichapụ oghere ma ọ bụ site na ngwaike ngwaike, atụmatụ nke gosipụtara iji melite 25%. Ọrụ ọkọlọtọ dị ọtụtụ, n'etiti ha rụọ ọrụ Google Assistant y Ọrụ Google Lens na onyonyo dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi eme ka nchọgharị Google Chrome rụọ ọrụ ngwa ngwa na gam akporo
Ejirila Nokia 1.4 jiri gam akporo Go: atụmatụ, ọnụahịa na nnweta
Sony Xperia 1 III na-aga n'ihu na usoro kpochapụwo